Qaraxyo ka dhacay magaalada Mosco
Ugu yaraan 35 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii laba qarax ay saaka aroortii ka dhaceen Mosco.
Weerarradan is qarxinta ah ee saaka ka dhacay laba xarumood oo laga raaco tareemada dhulka hoostiisa mara, ayay masuuliyiinta Ruushku sheegeen in ay gaysteen laba haween ah oo muslimiin ah oo ka soo jeedda gobolka Caucasis-ka. Weeraradan ayaa waxay dhaceen saaka subaxnimadii wakhtiga ay tareemadu ugu saxmada badnaayeen ee ay dadku sii shaqo tagayeen
Qaraxa hore waxaa uu ka dhacay xarunta tareemada ee Lubyanka,haweenay af hayeen ah oo u hadashay wasaarrada gurmadka deg-deg ah ayaa sheegtay in ay ugu yaraantii 23 qofi ay ku dhinteen weerarkaasi hore. Qaraxa labaad oo shan iyo afartan daqiiqadood kadib ka dhacay xarunta tareemada ee Park Kultury ayaa waxaa isagana ku dhintay 12 qof. Sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ilaa 60 qof.
Dad goob joog ahaa ayaa ku warramay in qas iyo jahawareer uu ka dhacay labadaasi xarumood ee tareemada laga raaco kadib markii ay isku qarxiyeen labadaasi haweenka ah oo dhexda ku soo xidhay waxyaabaha qarxa.
Masuuliyiinta ruushka ayaa ku dhawaaqay in si wayn loo adkaynayo guud ahaanba ammaanka dalka ruushka, gaar ahaana garoomada diyaaradaha iyaga oo ka cabsi qaba in ay weerarro kale dhici karaan.
Madaxwaynaha ruushka , Dmitry Medvedev,ayaa sida uu sheeggay afhayeen u hadlay aqalka madaxtooyada ee krimiliinka ee magaalada moscow waxaa uu amar ku bixiyay in sutida loo qabto argagaxisada.
Ciidamada ammaanka ruushka ayaa dagaal aan waxba la isula hadhin waxaa ay kula jiraan kooxaha islaamiyiinta ah ee kacdoonada ka wadda chechniya iyo Ingushetia oo ku yaalla gobolka caucasiska.
Danjiraha Somalia u jooga magaalada Moscow Xasan Xandule oo VOA-da la soo xidhiidhay ayaa sheeggay inaanay waxyeelo qaraxyadaasi ka soo gaadhin dadka somalida ah ee magaalada Moscow ku nool uu danjirahu tiradoodda ku tilmaamay labaatan qof.
Qeybta hoose ee qoraalkan ka dhagayso wareysi uu weriye C/salaam Hereri la yeeshay George Kepchits, oo ah khabiir Ruush ah oo Af-Somaaliga iyo Af-Amxaariga ka dhigi jiray jaamacadaha Moscow iyo Berlin, haatana faalooyinka ugu qaabilsan Radiyowga codka Ruushka oo jooga magaalada Moscow.